१५ दिन कडा लकडाउन गर्ने ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/१५ दिन कडा लकडाउन गर्ने !
१५ दिन कडा लकडाउन गर्ने !
कात्तिक २७, काठमाण्डौ । काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै संक्रमण कम गर्नको लागि काठमाडौ उपत्यकामा पुन १५ दिन कडा लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को निर्देशक समितिले उपत्यकामा पुनः एकपटक कडा लकडाउनुपर्ने सुझाव दिएका हो ।
कोरोना महामारीका कारण देशैभर गत चैत ११ बाट घोषणा गरियो उतm लकडाउन ४ महिनापछि साउन ७ गतेबाट हटाइएको थियो । लकडाउन शुरू गर्दा देशैभर जम्मा २ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने लक डाउन हटाउने निर्णय गरिसक्दा प्रतिदिन औसत ४ सयमा कोरोना संक्रमण भेटिएको अवस्था थियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका सूर्य थापालाई श्रद्धाञ्जलिको ओइरो !